May 21, 2021 747
यो पनि हेर्नुहोस्ः एकसाथ जन्मिएका व्यक्तिहरु किन उस्तै हुँदैनन् ? कुनैपनि व्यक्तिको जीवन निर्धारणमा केवल उसको जन्म-समय मात्र होइन, बरु गर्भाधान समय र प्रारब्ध (पूर्व संचित कर्म)को भूमिका पनि महत्वपूर्ण छ ।यसप्रकार ज्योतिष तीन आयममा आधारित छ । यो तीन आयम हो, प्रारब्ध, गर्भाधान समय र जन्म समय ।
यसलाई तीन महत्वपूर्ण आयममा अर्थात जन्म-समय, गर्भाधान-समय र प्रारब्धको अखण्ड प्रभावले मान्छेको सम्पूर्ण जीवन सञ्चालित हुन्छ । कुनै व्यक्तिको जन्म-प्रमाणपत्रको निर्माणमा जुन सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व हो, त्यो हो समय । जन्म-समयलाई लिएर पनि ज्योतिषाचार्यमा मतभेद छ । केही विद्वान शिशु रोएको अवस्थालाई जन्मको सही समय मान्छन्, कतिले भने नाल-विच्छेदनलाई सही मान्छन् ।
यसमा कनिपति सन्देह छैन ।ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भने हामी यस तीन आयाममा केवल एक आयाम अर्थात जन्म-समय ज्ञात हुन्छ, तर तेस्रो आयाम अर्थात प्रारब्ध न हामीलाई ज्ञात हुन्छ न त सामान्यतः त्यसलाई थाहा पाउन नै सकिन्छ । यसैले यस विश्वमा एकै समयमा जन्म लिने व्यक्तिहरुको जीवन पनि आपसमा भिन्न भिन्नै हुन्छ ।
ज्योतिष मान्छेको भविष्यको ज्ञात हुने पद्धतीको नाम हो । यो पद्धती भिन्न हुनसक्छ । एवं यो देश, काल र परिस्थिती अनुसार समय-समयमा अपडेट गर्नुपर्ने आवश्यक पनि हुन्छ । एक सिद्धयोगीले पनि कुनै व्यक्तिको विषयमा त्यती सटिक भविष्यवाणी गर्न सक्छ, जति कि एक जन्मकुण्डली हेर्ने ज्योतिषी वा हस्तरेखा विशेषज्ञले गर्न सक्छ ।
Nextआज ०८ जेठ २०७८ शनिवारको राशिफल हेर्नुहोस् निकै राम्रो छ
यो फूलले दिन्छ क्यान्सर, सुगर जस्ता खतरनाक रोगबाट छुटकारा, यसरी गर्नुहोस् प्रयोग
पत्नीले यी काम गरिरहेकी छिन् भने कहिलै हुँदैन् पतिलाई पैसाको कमी (15858)
अस्पताल नगएरै गर्भमा छोरी छ कि छोरा सजिलै पत्ता लगाउने तरिका हेर्नुहोस् (13123)
बाहिर निस्केको पेटलाई भित्र पसाउन चाहानुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी ७ सजिला घरेलु उपाय ! (12376)